ပုဒ်မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ့ပဲ သူမကို ဒလံမလို့စွပ်စွဲနေကြ တဲ့အပေါ် ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ် – Cele Lover
ပုဒ်မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ့ပဲ သူမကို ဒလံမလို့စွပ်စွဲနေကြ တဲ့အပေါ် ထိထိမိမိတုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်
ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်များစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ် တဲ့အ ပြင် ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာနဲ့သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ယနေ့အချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အ ဝရရှိ ထား တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်..။နှိုင်းယှဉ်က သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရုံတင်မကပဲ Online Sale ရောင်းတဲံနေရာမှာလည်း အောင် မြင်နေသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်က ခင်ပွန်းကောင်းပီသပီး သူမအပေါ်အရမ်းကိုချစ်ခင်ကြင်နာတဲ့ခင်ပွန်းသည် ကိုဘင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ချစ်စရာသား လေး တစ် ယောက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကိုဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။လတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သူမဟာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှာအမြဲပါဝင်နေတဲ့သူမကို ဒလံမလို့ပြောတဲ့အပေါ် အခုလိုပဲတုန့်ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်က” ဪ… 505 ထဲမပါလို့ ဒလံမ လို့ ပြောချင်တာလားမသိ Feb 1ရက်နေ့ထဲက Fbမှာ စတင်တယ်… 7ရက်နေ့မှာ လမ်းပေါ်စတ က်တယ်…အကြီး နဲ့ အကျယ်အော်ခဲ့တယ် အများကြီး လှုခဲ့တယ်သိအောင်တစ်မျိုး မသိအောင်တစ်မျိုးပရိသတ်တွေကဘာမှ မလုပ်ဘူးလား ပြောလို့ ကမှူးရှုးထိုးထလုပ်တဲ့ အယောင်ပြ သာကူးယောင်ခြောက်ဆယ်မဟုတ်ဘူးးးရေးချင်တာရေးပီး မဘလော့ခ်ပါနဲ့….မ Dနဲ့….
ကျွန်မမှာတာ့ ကိုကေညီ့အကောင့်ကိုယူသုံးနေမှန်းသိတောတောင် မဘလော့ဖြစ်ဘူးးး ဦးလေးကြီး အာဘော်တွေက်ုကြိတ်ခိုက်နေတာ…ဦးလေးကြီးက ကွိုင်ပဲ.😂ခုလည်းဗိုက်ကြီးနေလို့ ဦးလေးကြီးရေ…စိတ်လျော့ဖို့ တားနေဝိုင်းပြောနေကြလို့…လျှော့ထားတာ..ဒလန်အစစ်တွေ ထပ်ရှာလိုက်ပါအုံးးးးအနုပညာလောကထဲမှာ….အများကြီးပါ….😏😏😏ပုံနေတာပဲ😏😏😏” ဆိုပြီး သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေ တုန့်ပြန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်…။
ပုဒ္မ (၅၀၅) ထဲမပါတာနဲ႔ပဲ သူမကို ဒလံမလို႔စြပ္စြဲေနၾက တဲ့အေပၚ ထိထိမိမိတုန႔္ျပန္လိုက္တဲ့ ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္
ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ႏႈိင္းယွဥ္ျမင့္မိုရ္ဟာဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္မ်ားစြာကို ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ တဲ့အ ျပင္ က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကိုပီျပင္ပိုင္ႏိုင္စြာနဲ႔သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို အျပည့္အ ဝရရွိ ထား တာပဲျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္..။ႏႈိင္းယွဥ္က သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္႐ုံတင္မကပဲ Online Sale ေရာင္းတဲံေနရာမွာလည္း ေအာင္ ျမင္ေနသူတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏႈိင္းယွဥ္က ခင္ပြန္းေကာင္းပီသပီး သူမအေပၚအရမ္းကိုခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့ခင္ပြန္းသည္ ကိုဘင္းကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အျပင္ ခ်စ္စရာသား ေလး တစ္ ေယာက္ကိုလည္းပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမိသားစုဘဝေလးကိုျဖတ္သန္းေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။လတ္တေလာမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း သူမဟာ လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာ တက္ႂကြစြာပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုနိ္ုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမွာအၿမဲပါဝင္ေနတဲ့သူမကို ဒလံမလို႔ေျပာတဲ့အေပၚ အခုလိုပဲတုန႔္ျပန္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ႏႈိင္းယွဥ္က” ဪ… 505 ထဲမပါလို႔ ဒလံမ လို႔ ေျပာခ်င္တာလားမသိ Feb 1ရက္ေန႔ထဲက Fbမွာ စတင္တယ္… 7ရက္ေန႔မွာ လမ္းေပၚစတ က္တယ္…အႀကီး နဲ႔ အက်ယ္ေအာ္ခဲ့တယ္ အမ်ားႀကီး လႈခဲ့တယ္သိေအာင္တစ္မ်ိဳး မသိေအာင္တစ္မ်ိဳးပရိသတ္ေတြကဘာမွ မလုပ္ဘူးလား ေျပာလို႔ ကမႉးရႈးထိုးထလုပ္တဲ့ အေယာင္ျပ သာကူးေယာင္ေျခာက္ဆယ္မဟုတ္ဘူးးးေရးခ်င္တာေရးပီး မဘေလာ့ခ္ပါနဲ႔….မ Dနဲ႔….
ကြၽန္မမွာတာ့ ကိုေကညီ့အေကာင့္ကိုယူသုံးေနမွန္းသိေတာေတာင္ မဘေလာ့ျဖစ္ဘူးးး ဦးေလးႀကီး အာေဘာ္ေတြက္ုႀကိတ္ခိုက္ေနတာ…ဦးေလးႀကီးက ကြိဳင္ပဲ.😂ခုလည္းဗိုက္ႀကီးေနလို႔ ဦးေလးႀကီးေရ…စိတ္ေလ်ာ့ဖို႔ တားေနဝိုင္းေျပာေနၾကလို႔…ေလွ်ာ့ထားတာ..ဒလန္အစစ္ေတြ ထပ္ရွာလိုက္ပါအုံးးးးအႏုပညာေလာကထဲမွာ….အမ်ားႀကီးပါ….😏😏😏ပုံေနတာပဲ😏😏😏” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာကေန တုန႔္ျပန္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ဖတ္ရႈေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္…။
Previous Article CDM မှာ ပါ ဝင် လာ သော ရေတပ် အရာ ရှိ ရေးသည့် စာ…
Next Article ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေလှိုင်လှိုင်ပြောပြီး စာနာစိတ်မရှိ တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်တဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ ထူး အယ်လင်း